Frozen Keyboard – Myanmar 3.3.2 APK – APKtd
Frozen Keyboard – Myanmar 3.3.2 APK
9.8	(6296)Apps, Personalizationby Myanmar Keyboard Developer
Description of Frozen Keyboard - Myanmar
Frozen Keyboard isavery simple and easy-to-use Zawgyi Myanmar keyboard app which can be used on Android Version 4.0 and higher. It is easily accessible for operation, support both Myanmar (Zawgyi) and English language input methods without requiring to visit phone settings menu.
Frozen Keyboard help you to type faster, easier, and over 3000+emojis, custom keyboard size, keyboard font size and miracle keyboard themes. You can choice Frozen Keyboard with two type of keyboard layouts that are New Keyboard Layout and Old Keyboard Layout.
Myanmar Keyboard user can easily type Myanmar Zawgyi with Frozen Keyboard. Frozen Keyboard is compatible with Zawgyi Font, Myanmar Font, Burmese Font and popular in myanmar IT community as first Myanmar Keyboard, Burmese Keyboard, Zawgyi Keyboard, Best Myanmar Keyboard, very simple and best layout design.
Our team is always listen our customer feedback and review about as our product and to provide for better product, better keyboard for user. Our keyboard vision is “Frozen Keyboard is your Keyboard” So, we go Frozen Keyboard with your wish and desire. We provide to you better typing experience in chatting message and instant message.
“No doubt to believe that Frozen Keyboard shall give pleasure to you; why not download now!”
– custom theme
– old keyboard layout Support
– old keyboard with new emoji
–2in 1 keyboard (2 layout in one keyboard)
– support Myanmar (Zawgyi) and English Language
– simple keyboard layout
– long press typing
– beautiful emoji
– theme store
– keyboard size and font adjustment
– font style changer
# If you want to choice old keyboard layout, the first thing that you should do is enable it in Frozen Keyboard setting of your smartphone or tablet. In the setting, to do that you should click the enable keyboard button and then you will seealist. There you should select Frozen Keyboard Old. #
Follow us – www.facebook.com/frozenkeyboard2
“Frozen Keyboard ကိုအရိုးရှင်းဆုံး ကီးဘုတ်ဒီဇိုင်း နဲ့ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားပြီး Android Version 4.0 အထက်မည့်သည့်ဖုန်းတွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ကီးဘုတ်လက်ကွက်ကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပြီး ကီးဘုတ် ထည့်သွင်းခြင်းကိုလည်း Application ထဲမှာတင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် အသတ်တွေ၊ နှစ်လုံးဆင့် အက္ခရာတွေကိုလည်း Long press ဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူရိုက်နုိုင်ပါသည်။
Frozen Keyboard ဟာဆိုရင် ပိုမိုလျှင်မြန်ပြီး သုံးစွဲရလွယ်ကူလာတဲ့ ကီးဘုတ်ဖြစ်လာသည့်အပြင် Emoji ဒီဇုိုင်း 3000 ကျော်နှင့် ကီးဘုတ် size ၊ font size တွေကို စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိုနိုင်ပါပြီး။ ကီးဘုတ်အနိမ့်အမြင့်ကိုလည်း Setting ထဲမှာ မိမိစိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ Keyboard Background နဲ့ Key Color တွေကိုလည်း မိမိစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နုိုင်ပါပြီ။ ယခုဆိုလျှင် မိမိ Gallery ရှိနေတဲ့ ပုံမှန်သမျှက သင့်ရဲ့ Keyboard Background အဖြစ်ပြောင်းလဲနုိုင်ပါပြီ။ အသစ်သစ်နဲ့လန်းနိုင်ဖို့ အခုဘဲ Frozen Keyboard ကို Download လုပ်ထားရအောင်”
ပါဝင်တဲ့ Feature များ
– မိမိစိတ်ကြိုက် ကီးဘုတ်နောက်ခံကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
– Frozen Keyboard လက်ကွက်အဟောင်းပြန်လည်ပါဝင်လာခြင်း
– ကီးဘုတ် လက်ကွက်အဟောင်းမှာ emoji ထည့်သွင်းပေးထားခြင်း
– ကီးဘုတ် လက်ကွက်အဟောင်းနဲ့ အသစ်ကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
– မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ကီးဘုတ်လက်ကွက် ပါဝင်ခြင်း
– ရှင်းလင်းပြီး စာရိုက်လို့ ကောင်းမွန်တဲ့ လက်ကွက်ပုံစံကို တည်ဆောက်ထားခြင်း
– မြန်မာစာလုံးအသတ်တွေ၊နှစ်လုံးဆင့်တွေကို Long press နှိပ်ပြီးအလွယ်တကူ ရိုက်နှိပ်နိုင်ခြင်း
– များပြားလှပတဲ့ Emoji icon အသစ်များ ပါဝင်ခြင်း
– ကီးဘုတ် theme မျိုးစုံကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း
– ကီးဘုတ် size ၊ font size ကို စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိုနိုင်ခြင်း
– Font changer ပါဝင်လာခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
#ကီးဘုတ်အဟောင်းချိန်းနည်း – Frozen Zawgyi Old ကို Setting > Enable Keyboard မှရွေးပေးပြီး Select Keyboard မှ ထက်ရွေးပေးပါ။#
** Hot Update **
– NEW FROZEN WALLPAPER STORE
– Store Slider Added
– Available search function for wallpaper store
– Auto scroll function for wallpaper list
App Information of Frozen Keyboard - Myanmar
App Name Frozen Keyboard - Myanmar
Package Name ninja.thiha.frozenkeyboard2
Rating 9.8	( 6296 )
Developer Myanmar Keyboard Developer
Tags: Frozen Keyboard - Myanmar 3.3.2 Apk, Frozen Keyboard - Myanmar Apk
Related Posts of Frozen Keyboard - Myanmar
Anime X Wallpaper 3.15
Love Story Games: Amnesia 11.0
CardGames +online 3.4.9.9
Color Call - Caller Screen, LED Flash 1.1.2
Theme for Galaxy J1 Ace HD
Guide for NBA 2K19